Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Marcos Llorente Childhood Story Plus Nkọwapụta Untold Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Marcos Llorente na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-egosi akụkọ ihe mere eme nke ndị ọkachamara na-agba ọsọ na Spanish. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke Marcos Llorente's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Marcos Llorente Early Life and Bilie.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ ya bụ egwuregwu nke ebumnuche abua di nma weghaara Liverpool n'oge oge nke 2019/2020 Champions League nke gburugburu-nke 16.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akwụkwọ akụkọ Marcos Llorente nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Marcos Llorente Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ihe ndị na-ebido Biography, ọ na-eburu aha “Marco“. Marcos Llorente Moreno mụrụ na 30th nke Jenụwarị 1995 nne ya, María Ángela Moreno, (onye n’ezi nkatana nna Paco Llorente, (onye agba osogbo agba oso) n'obodo Madrid, Spen.
Dị ka ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ na mgbọrọgwụ ezinụlọ, egwuregwu Marcos Llorente bụ nwata na-atọ ụtọ.
O tolitere na-achọpụta na ihe ezinụlọ ya na-eme bụ nke a na-ekenyekarị ya 'mkpụrụ ndụ ihe nketa'nke na-asọ n'ime akwara ya dị ka nwatakịrị.
Eziokwu bụ, ndị ezinụlọ Marcos Llorente (gbatịrị) ma nne na nna bụ ndị na-agba bọọlụ na Real Madrid.
Little Marcos tolitere na-enwe ihe ọmụma banyere nnukwu nne na nna ya buru ezigbo ihe ndekọ Real Madrid nke ka ga-agbaji.
N'ihi ya, ọ bụ ihe karịrị nna na nwa na-arụ ọrụ, ọ bụ ezie na nna ya bụbu ndị ịgba egwu.
N'oge ahụ Marcos dị obere afọ 3, nna ya Paco Nwachukwu (Foto dị n'okpuru) kpebiri ikwusi akpụkpọ ụkwụ ya. Maka nna ọ bụla na-agba bọl (gụnyere Paco), ọ na-ewute ya nke ukwuu ịla ezumike nká.
Paco achọghị ka ọ bụrụ onye ga-abụ onye ikpeazụ ga-egwu bọl na osisi ezinụlọ ya. Ndị na-agba ọsọ ezumike nká nwere mmekọrịta chiri anya na nwa ya nwoke bụ Marcos, na-enwe olileanya ịkpụzi ya ka ọ gaa n'ihu ibi nrọ ezinụlọ.
Paco Llorente guzobere njikọ siri ike ya na nwa ya nwoke na nwata. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ịhụ ka nwa ya nwoke na-ebi ndụ n'ezinụlọ.
Marcos Llorente's Nzụlite Ezinụlọ na Ndụ Ndụ M:
N'ịbụ onye sitere n'ezinụlọ na-egwu egwuregwu nke ndị nne na nna ya (nna ya), nwanne nna ya na nne na nna ya ochie nwetara ọtụtụ ego eji egwu maka Real na Atletico Madrid, ọ bụ ihe ziri ezi ikwubi na o nwere ike ịbụ na Llorente sitere n'ezinụlọ nwere akụ na ụba / nke dị elu.
Marcos bụ nwatakịrị nwoke nke nwere nrọ mmalite nke ndụ ya ịbanye "Ndị ezinụlọ nke Madridistas ” ebe nna ya, nna nna ya, na nne nne ya nwere.
Marcos Llorente Mmụta:
N'ihi ndị òtù ezinụlọ ndị na-eduzi ihe atụ, Marcos nwere olileanya mbụ ya maka inweta agụmakwụkwọ football na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Real Madrid.
Ọ bụ ezie na papa ya na-egwuri egwu n'ebe ahụ n'oge ahụ, ọ maara na ọ ga-arụsi ọrụ ike nke ga-eme ka ezinụlọ na-enwe mmekọrịta na-akpọ ya maka ule.
N'oge ahụ, Marcos ga-ahọrọ iyi akwa Los Blancos kwa ụbọchị ka ọ na-akwado ọrụ ya n'okporo ámá Madrid.
Mkpebi siri ike na mkpa ọ bụla ịgbaso nzọụkwụ nke ndị nna nna ya, nna nna ya na nna nna ya adịtụghị mgbe ọ pụtara dịka echiche efu.
Marcos Llorente Child Photo- Afọ ndị mbụ na football.
Paco Llorente mgbe ọ lara ezumike nká na football (na 1998) jiri afọ 4 dị mma kụziere nwa ya nwoke ihe banyere football.
N'ịghọta ọchịchọ nwa ya nwoke ịgba bọl maka ndụ, ndị lara ezumike nká lara ezumike nká mere ihe niile o nwere ike iji kwado ọchịchọ ya.
Marcos Llorente Ndụ Ndụ:
Mgbalị isonye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Real Madrid na-abịa mgbe ụfọdụ na nrụgide dị ukwuu ma ebe ụmụaka pere mpe nwere ike ijikwa ya, ndị ọzọ enweghị.
Ka ọ na-erule afọ 2002, Marcos adịla njikere ịmalite ndụ na agụmakwụkwọ. N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị Real Madrid nke ọ tụrụ anya na mbụ.
Kama ikwe ka nwa ha nwoke Real Madrid na-ahụ maka agụmakwụkwọ ka ọ kwụsị ịchọrọ onwe ya, nne na nna Marcos Llorente kpebiri ịhapụ ya ka ọ sonyere Las Rozas, otu ọgbakọ dị na ezinụlọ.
Dika edere n'okpuru, ulo ezinulo nke Marcos Llorente na Las Rozas bu nani nkeji 20 rue Madrid.
Marcos Llorente biri maka Las Rozas CF ebe ọ na-egwu bọl maka afọ 4.
Marcos tọgbọrọ ntọala ọrụ ya na Las Rozas Club de Fútbol. Ekele diri n'ọchịchọ dị elu maka agụmakwụkwọ ka elu, Marcos gara n'ihu na-egwuri egwu maka agụmakwụkwọ ndị ọzọ bụ; Nueva Roceña (2006 rue 2007) na Rayo Majadahonda (2007 rue 2008).
Marcos Llorente biography - Tozọ Gara Akụkọ nke:
N'agbanyeghị na ọ na-egwuri egwu maka obere agụmakwụkwọ ndị ahụ, nwata ahụ nwere mkpebi siri ike iji mee ka nrọ ụlọ akwụkwọ Real Madrid mezuo. Eziokwu bụ, ọ daghị mbà ma nwata ahụ ka nwere olile anya isonyere Real Madrid.
Ọ joyụ nke ndị nne na nna na ezinụlọ Marcos Llorente (ọkachasi nna ya) amaghị oke n'oge ahụ ọ bụghị naanị Real Madrid na-akpọ nke ha kama ha gafere ule agụmakwụkwọ ha.
Marcos Llorente n'oge ọ bụ nwata na ụlọ akwụkwọ Real Madrid ghọrọ onye na-ewu ewu whiz nwa. Ọ bụ ụdị nwatakịrị a gọziri agọzi na njigide nke ndị na-emegide ya n'oge gara aga.
Marcos kwalitere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Real Madrid ngwa ngwa ka ọ na-eme nke ọma megide ụdị ndị iro niile. Ọbụna ọ ghọrọ onye dị ka onye isi nke mgbe ọ bụ nwata.
Nwa okorobịa Marcos na Real Madrid Academy.
Marcos Llorente Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe o masịrị ndị otu Real Madrid Juvenil nke ukwuu, Marcos kwalitere Real Madrid B Zidine Zidane onye dị ka n'oge ahụ, bụ onye nchịkwa nke Real Madrid na-echekwa otu.
Afọ 2017 hụrụ ka onye ọkpụkpọ bọọlụ na-eso ndị egwuregwu Real Madrid Real Madrid bọọlụ Mariano, Isco, Modric na Kroos.
Na oge 2017-2018, Marcos Llorente nyere aka n'inyere klọb mmeri UEFA Champions League, Super Cup na FIFA Club World Cup ebe ọ meriri nwoke nke egwuregwu ahụ.
Marcos Llorente Bilie na Real Madrid.
Na 20 June 2019, onye ọkpọ ahụ nwere mmetụta na ọ rụzurula nke ọma yana mkpa maka oge egwuregwu ka mma kpebiri iso ndị otu mpaghara Atlético Madrid. Ọtụtụ na-ajụ mkpebi ya, na-ekwupụta ya dị ka ụdị nke ịgbaghari ụkpụrụ ịgba bọl ezinụlọ ya.
Dị ka n'oge ederede Marcos Llorente's Biography, a gwara onye midfielder na - eto eto site na ike rue na ike site na mma ya na ubochi puru iche.
N'ikwu maka ụbọchị pụrụ iche, precisely na 11th nke March 2020, Marcos nwetara aha otutu “Slayer Liverpool".
a aha otutu wee bia ihe mgbaru ọsọ abụọ mebiri obi ndị fans Liverpool. Marcos Llorente na-ezipụ zitere ndị mmeri nke European / 2018 site na asọmpi Champions League nke 2019/2019.
Icheta ụbọchị ahụ Liverpool Slayer gbachiri 2018/2019 European Champions.
Obi abụọ adịghị ya, ndị nne na nna Marcos Llorente nwere obi ụtọ ịhụ nwa ha nwoke ka ọ na-eburu ezinụlọ ha agbụrụ.
N'ihu anya anyị, anyị nwere ike ịnọ na njedebe nke ịhụ nwatakịrị ọzọ ka ọ na-eto eto na-eto eto. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Marcos Llorente si Nwa nwanyi ?:
Ogologo Llorente ama ama ama a na - akpọ ndị na - eme ihe nkiri na intanet ka ha mara ma ọ nwere nwa agbọghọ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ lụọla nwanyị n'ezie nke na ọ nwere nwunye. Eziokwu bụ, n'azụ onye na-eme egwuregwu bọọlụ na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị na-adọrọ adọrọ nke na-agafe aha Patricia Noarbe.
Zute Nwa Nwanyị Marcos Llorente- Patricia Noarbe.
Ọnye na-bụ Patricia Noarbe? - Nwanyị Marcos Llorente:
A na-akpọkarị ya onye nwere “Mma na ụbụrụ ”. Patricia bụ guru ahụike na njide akara ogo. Ihe ndị mara mma Spanish nwere ogo abụọ na Iwu na Nchịkwa azụmahịa na njikwa.
Patricia bụ ọkachamara na ịnye ndị ahịa ọzụzụ ahụike na ịntanetị. Ọ bụ ya nwe “www.edemere.es“, Weebụsaịtị nke na-enye ọzụzụ ahụike na ndụmọdụ nri, ọkachasị maka egwuregwu.
Ị maara?… Patricia Noarbe bụ naanị ihe kpatara mbufe Marcos Llorente na Man United emeghị.
Dabere na Daily Star, Marcos chọrọ ka enyi ya nwanyị gụchaa akwụkwọ mahadum ya tupu ya ekpebie ihe ọ bụla banyere ọdịnihu ya.
Patricia Noarbe bụ onye anaghị achọ ihe ọ bụla karịa inye nkwado nke nwoke maka nwoke. Foto dị n'okpuru, a hụrụ ya na-eme ememe oge enyi ya nwoke wedatara Liverpool n'otu oge.
Patricia Noarbe na-eme ememme oge enyi ya nwoke dara Liverpool.
Otu n'ime ezumike kachasị amasị di na nwunye maka oge ọkọchị bụ agwaetiti Spen na mmiri Ibiza. Ekpele uzo ha ji hu onwe ha n'anya, oputara na “alụmdi na nwunye”Nwere ike ịbụ ihe ọzọ ha ga-eme.
Marcos Llorente na enyi ya nwanyị na nwunye ya na-etinye ezigbo oge.
Marcos Llorente Ndụ Onwe Gị:
Ndị hụrụ football n'anya, dịka anyị niile bụ, hụrụ anụ ụlọ ha n'anya na Marcos Llorente abụghị otu.
Agbanyeghị na enwere okwu na enweghị iguzosi ike n'ihe fọdụrụ na egwuregwu nke oge a, ọ gaghị elebara mmekọrịta dị n'etiti Marcos na nkịta ya (KD) anya.
Zute Nkịta Marcos Llorente.
Na nchịkọta, Marcos Llorente na-aga n'ihu, na mbụ, nweere onwe ya na enweghị nkịta. Ọ na-enweghị mmasị na adịghị ike, na-ekwe nkwa, na-ama owu na-ata ma ọ bụ na-agwụ ike ọnọdụ.
Marcos Llorente Web:
N'ihe ruru ihe ruru nde euro iri na abụọ na ọnụ ahịa ahịa karịrị nde euro 12, ọ dị mma ịsị na Marcos bụ onye na-enweghị ego.
Agbanyeghị, n'ihe metụtara ego, Marcos a nwere ikike iji nwee nguzozi n'etiti mmefu na ịchekwa ego.
Na-ekwu maka mmefu, otu ihe doro anya (ụgbọ ala ya). Nke a bụ Marcos na-ese onyinyo n'azụ wiil nke Audi mara mma, ụgbọ ala ọ họọrọ.
Marcos Llorente Car- O yiri ka ọ bụ onye na-akwado Audi.
Marcos Llorente Ndụ Ezinụlọ:
N'ikwu banyere usoro ezinaụlọ, ọ dị mkpa ime ka ị mara na na mkpokọta, ndị ikwu ya gwuru Real Madrid ihe karịrị 1100, na-ekere òkè na akụkọ klọb ahụ.
N'akụkụ a, anyị ga-ewetara gị ozi ndị ọzọ gbasara nne na nna Marcos Llorente na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ.
Banyere Papa Marcos Llorente:
Francisco 'Paco' Llorente Gento mụrụ na 21st ụbọchị nke May 1965 n'obodo Valladolid, Spain. Ọ bụ onye ọkpụkpọ lara ezumike nká na-egwuri egwu nke kachasị maka Real na Atletico Madrid.
N'okpuru bụ foto nke Paco Llorente n'oge ya na Atletico Madrid ebe nwa ya nwoke (n'oge ederede) na-egwu bọl ya.
Zute nna Marcos Llorente- Paco Llorente n'oge ya na ndị Atletico na Real Madrid na-egwu egwu.
Banyere Marcos Llorente nne:
Dịka di ya na nwa ya nwoke, o deekwala isi nke ya na egwuregwu. Nne Llorente María Ángela na-egwu basketball n'oge praịm minista ya. Nke a bụ nwanyị na-eme egwuregwu nke tozuru oke aha Llorente.
More banyere Marcos Llorente'Nwanne nna:
Enweghi okwu zuru oke iji kọwaa ịdị mma nke Paco Gento bụ nwanne nna Marcos Llorente si n'akụkụ nna ya.
A na-akpọkarị ya “Nwoke ahụ nwere otu iko kuko aha ya“, Paco mara dị ka onye nke kacha mma-ekpe-wighter niile oge na otu onye nke kasị ukwuu Madridistas na akụkọ ihe mere eme nke Real Madrid.
Zute nwanne mama Marcos Llorente, Paco Gento, akụkọ egwuregwu bọọlụ.
Amụrụ na 21st nke Ọktoba 1933, Real Madrid striker nwere akụkọ ihe mere eme nke ịbụ onye ndu ọhụụ nke klọb na naanị nwoke meriri iko European isii.
Paco Gento bụ akụkụ nke akụkọ egwuregwu klọb jupụtara Di Stéfano, Kopa, Puskas na ndị egwuregwu ndị ọzọ pụtara ìhè.
N'ime oge 18 ya na Real Madrid, o meriri aha 12 La Liga na iko European isii (ise n’ime ha bụ otu n’usoro). Nke a bụ taa, ndekọ na-enweghị isi. N'okpuru bụ mkpirisi mkpirisi Paco n'oge ụbọchị egwuregwu ya.
Ndị ọzọ nne na nna nne Marcos Llorente (umu nne nne ya) tinye ihe ndia;
(1) Julio Gento (onye na-agba bọl): Ọ bụkwa onye na-agba ụkwụ (onye na-agbachitere) onye na-egwuri egwu maka Real Madrid. Ọ dị afọ isii karịa nwanne ya nwoke Paco (eserese n’elu).
(2) Antonio Gento (onye na-agba bọl): is nwanne nke nwoke nke okenye nyere Gento na Julio. Ọ bụkwa onye na-eti ihe n'oge ya.
Gentmụnne atọ nke Gento nwere nwanne nwanyị aha ya bụ María Antonia Gento. Ị maara?… N'ime ụmụ nwoke anọ ejikọtara na Real Madrid, Otu n'ime ha bụ papa Marcos Llorente. Mụ nwoke anọ nke Maria gụnyere; Joe Llorente, Toñín Llorente, Paco Llorente (Aha nna Marcos Llorente) na Julio Llorente.
More banyere Marcos LlorenteNna Ukwu:
Ramon Grosso bụ nna nna nne Marcos Llorente bụ onye na-abụbu onye nrịba ama maka Real Madrid.
Ị maara?... Ramon ketara uwe elu 9 nke Real Madrid site na Alfredo Di Stefano wee gaa n'ihu merie 1966 European Cup n'akụkụ Gento.
Grosso nwere ụmụ ise na otu n'ime ha, nwa ya nwanyị Aha ya bụ Maria Angela, onye mechara lụọ Paco Llorente (Marcos papa).
Nwanne nna Marcos Llorente- Paco Gento nọ n'ọrụ.
Ónmụ Ramon Grosso guzobere Ramón Grosso Foundation iji sọpụrụ nna ha. Ntọala ahụ na-arụ ọrụ enyemaka na Chad na ebe ndị ọzọ.
Marcos Llorente Eziokwu:
N'ezie #1: ya Osisi ezinụlọ nke Real Madrid Stars:
Ọ chọkwaghị nkwenye ọzọ na usoro ọbara nke nne na nna Marcos Llorente “Ọdịdị nke Madridistas ”. Nke a bụ osisi usoro ọmụmụ nke aha ndị Madridistas niile n'ezinụlọ Gento-Llorente-Grosso.
Osisi Ezinụlọ Marcos Llorente.
N'ezie #2: Aotu egwuregwu bọọlụ gogoro goro ọrụ:
Ihe niile mere na 2007 mgbe Atletico dị mkpụmkpụ nke ndị egwuregwu agụmakwụkwọ. Ndị klọb ahụ goro Marcos ka ọ kpọọ ka ọ nọchite anya ha n'asọmpi Gandia.
12 afọ Marcos Llorente dị ka ọ dị n'oge ahụ bụ onye na-agba ọsọ agụmakwụkwọ nke EF Roceña, obere ụlọ na obodo ya, Las Rozas. Nwere ike ịhụ ya na foto dị n'okpuru?
Marcos nọchitere anya Atletico Madrid mgbe ọ dị afọ 12.
Mgbe asọmpi ahụ, Marcos kama ịbanye na Atletico wee soro nzọụkwụ ezinụlọ ya, ihe ngosi nke hụrụ ya ịbanye Real Madrid Academy.
N'ezie #3: Mmebi ụgwọ ọnwa:
Kemgbe ọ banyere na Atlético Madrid, ndị na-achọ ịmata ihe amalitela ịchọpụta eziokwu Marcos Llorente, dị ka ego ole ọ na-enweta na klọb.
Na July 2019, Marcos Llorente mechiri nkwekọrịta ya na Atletico Madrid, otu nke hụrụ ka ọ na-etinye ego na-akwụ ụgwọ gburugburu € 2,100,000 kwa afọ. Na-agbaji ụgwọ ọnwa Marcos Llorente (2019 stats) na obere ọnụọgụ, anyị nwere ihe ndị a;
Enweta na Pound Sterlings (£)
Arnnweta ego kwa afọ € 2,100,000 £ 1,970,430 $ 2,286,312
Ego kwa ọnwa € 175,000 £ 164,202.5 $ 190,526
Arnnweta ego kwa izu € 43,750 £ 41,051 $ 47,631
Ego kwa ubochi € 6,250 £ 5,864 $ 6,804.5
Arnnweta ego kwa elekere € 260 £ 244 $ 283.5
Ego kwa nkeji € 4.3 £ 4.07 $ 4.7
Arnnweta ego na Sekọnd € 0.07 £ 0.06 $ 0.08
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Marcos Llorente'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Nkezi nwoke na Spen na-akpata € 1.889 Euro kwa ọnwa ga-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 7.7 iji kpata € 175,000 nke bụ ego Marcos na - enweta na 1 ọnwa.
N'ezie #4: Marcos LlorenteTattoos:
Inwe ihe nketa nke ezinụlọ ya n'ọbara ya zuru oke maka ndị na-agba ọsọ Spanish. Marcos, dị ka e kwuru n'okpuru, ekweghị n'ihe a na-akpọ “Ogbugbu Akara".
Ọ ga - achọ igosipụta veins na ahụ ya dị ala kama ịhapụ ụwa ka ọ hụ ihe osise.
Marcos Llorente nwetara ikike ikike karịrị nke mmadụ na ekwenyeghị na Tattoos n'oge edere
N'ezie #5: Marcos LlorenteOkpukpe:
Eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ n’ime ndị ezi-na-ụlọ ya (tinyere oke) Aha ndị Kraịst na-enye anyị ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji kwere na nne na nna Marcos Llorente zụlitere ya n'okpukpe Ndị Kraịst.
Ọ bụ ezie na nkwenye ya n'okwu nke okwukwe dị ala, nsogbu anyị na-akwado Marcos ịbụ onye Chrisitan.
Eziokwu Akụkọ ndụ:
Aha n'uju: Marcos Llorente Moreno.
aha otutu: Aha ya bụ Marcos.
Ụbọchị ọmụmụ: 30 January 1995.
Age: (25 ka ọ bụ na Machị 2020).
-arụ: Onye na-egwu egwuregwu (Onye na-agba bọọlụ).
Ndị nne na nna: Maria Angeles Moreno (Nne), Paco Llorente (Nna).
Nne nne ochie: Ramon Grosso.
Nna Nna Ochie Antonia Genco na Jose Llorente.
Nnukwu nne na nna nna: Onyeka Onwenu, Julio Gento,
Deede: Joe Llorente, Tonin Llorente na Julio Llorente.
Ụmụnne: Ọ dịghị onye
elu: 1.84 m (6 ft 0 na)
Ihe akara Zodiac: Aquarius.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Marcos Llorente Childhood Story Plus Uzo nke Utold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.